मधेस र पहाडबीचको द्वन्द्वले कसैलाई हित गर्दैन « Janata Samachar
मधेस र पहाडबीचको द्वन्द्वले कसैलाई हित गर्दैन
प्रकाशित मिति : 10 January, 2018 12:39 pm
जनताले जातीयता र क्षेत्रीयताका आधारमा नभई राजनीतिक दल, उम्मेदवार, संगठन, लोकप्रियता र मुद्दाका आधारमा मताधिकार प्रयोग गरेको देखियो । मोरङको क्षेत्र नम्बर १, २ र ३ मा क्रमशः एमालेका घनश्याम खतिवडा, नेपाली कांग्रेसका डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल र एमालेकै भानुभक्त ढकाल मधेसी समुदायको मतसहितले प्रतिनिधिसभामा विजयी भएका छन् । भित्री मधेस मानिने सिरहा क्षेत्र नम्बर ३ मा एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठ र सिरहा १ मा कांग्रेसका प्रदीप गिरी विजयी हुनु मधेस र पहाडबीचको विभेद अन्त्य गर्ने जनताको चाहना मतबाट प्रकट भएको देखिन्छ ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनपछि पहिचान र अधिकारका नाममा विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय आन्दोलन भए । मधेसका नाममा हुने राजनीति र पहिचानको नाराभित्र मधेस र पहाड अलग बनाउने षड्यन्त्र रहेको भन्नेहरू प्रशस्तै छन् । यसो भन्नेहरूले सत्यको अर्को पाटो बिर्सिएझैँ लाग्छ । किनकी मधेस र पहाडबीच राजनीति भन्दा बलियो सामाजिक सम्बन्ध छन् । वैवाहिक सम्बन्धमार्फत विकास हुँदै गरेको यो सम्बन्ध नयाँ पिँढी झनै अगाडि बढाएका छन् ।
गतवर्ष सम्पन्न पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवको परिवार र वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको परिवारबीच सम्पन्न वैवाहिक सम्बन्ध पनि यस्तै सामाजिक परिघटनाको गतिलो उदाहरण हो । पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवका नाति इञ्जिनियर अभिषेक यादव र वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीकी छोरी डा.निशाकुसुम भण्डारीबीच वैवाहिक सम्बन्धले मधेस र पहाड अलग होइन, एकै हो भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
दुई अलग समुदाय (मधेसी–पहाडी) बीच बढ्दै गएको राजनीतिक अविश्वास र आरोप–प्रत्यारोपले हाम्रो सम्बन्ध त्यति कमजोर छैन भन्ने सन्देश पनि यस्ता परिघटनाले दिएका छन् । यति मात्र होइन, राजा–महाराजका पालामा पनि मधेसी र पहाडी समुदायबीच वैवाहिक सम्बन्ध हुने गरेको चर्चा इतिहासमा पाइन्छ ।
मधेसका नागरिक पनि नेपाली नै हुन् भन्ने भावना जुम्लाको कुनै तामाङ समुदायको व्यक्तिले भन्न सक्नुपर्छ भने झापाको एउटा व्यक्तिले हुम्लाको समस्या बुझ्न सक्नुपर्छ र इलामको मान्छेले दार्चुलाको विषयमा जानकारी लिनुपर्छ
हुन त मधेसी र पहाडी समुदायबीच यो विवाह नै पहिलो भने होइन । राजनीतिमा स्थापित महत्वपूर्ण हस्तीले वैवाहिक सम्बन्धमार्फत मधेस र पहाडबीच साइनो गाँसेका छन् । राजनीतिमा मात्र होइन, सामाजका अन्य क्षेत्रमा स्थापित भएका यस्ता महत्वपूर्ण व्यक्तित्व छन्, जसले आफूमधेसी भए पहाडी र पहाडी भए मधेसीसँग विवाह गरेका छन् । उनीहरूको दाम्पत्य जीवन सुखमय र खुशीसाथ बितिरहेको छ । यसले समाजलाई जोड्दै लगेको छ । मधेस र पहाड अलग होइन भन्ने सन्देश पनि प्रवाह भएको छ ।
यस्तो वैवाहिक सम्बन्ध जति धेरै बढाउन सकिन्छ, त्यति नै दुई समुदायबीच नकारात्मक भावना अन्त्य गर्न सहयोग पुग्छ । भनिन्छ, आत्मीयता र मानवता क्षेत्रीयतामा छेकिन्न । नेपाली भूगोलभित्र बस्ने सबै नेपाली भए पनि त्यसभित्र थुप्रै समुदाय एवम् जातजाति छन् । त्यसभित्र पनि निश्चित भूगोलभित्र बस्दै आएकाले आफूलाई त्यो भूगोलको प्रतिनिधिपात्र मान्छन् । पछिल्लो समय बढ्दो शहरीकरण, सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग र विश्वव्यापीकरणको प्रभावले ‘मिक्स सोसाइटी’को अवधारणा बढ्दै गएको छ । आफ्नो जातीय एवम् सामुदायिक पहिचानभन्दा माथि उठेर समाजमा मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने भावना विकास हुन थालेको छ । विगत लामो समयदेखि मधेस र पहाडका विषयमा विभिन्न सवाल उठ्दै आएको भए पनि २०६२÷६३ को मधेस आन्दोलनपछि मधेस मुद्दा सतहमा आउन थाले र मधेससँग भएका विभेदका विषयले स्थान पाउन थाले ।
भौगोलिक सुगमता भएर पनि विकास निर्माणमा पछाडि पर्नु शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिञ्चाइँलगायतका राज्यले दिने सुविधामा मधेस सधैँ पछाडि नै रह्यो र मधेसलाई राज्यले सधैं हेपिरह्यो भनेर अधिकार प्राप्तिको उद्देश्यले विभिन्न नाम दिएर क्षेत्रीय दलहरू खुले, जसले २०७४ को प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राम्रो मत ल्याएर राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा पहिचान बनाउन सफल पनि भएको छ । मधेसको नाममा क्षेत्रीयरूपमा राजनीति गर्न खोलिएका दलहरूले अब आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्दै सामाजिक विखण्डनको होइन, एकता र सहकार्यका लागि पनि लड्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले अब मधेसको मुद्दा मात्र उठाएर राजनीति गर्ने होइन कि अबका दिनमा उनीहरूले मधेसको सामाजिक बनोटका साथै मधेस र पहाडका लागि सेतुका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ । मधेसमा हुने शीतलहर, बाढीको विषयसँगै पहाडको पहिरो, कर्णालीमा चामल अभाव भएको विषय, जुम्लामा सडक निर्माणमा ढिलाई भएको विषय पनि उनीहरूले उठाउन सक्नुपर्छ ।
मधेस विकासमा पछाडि परेको छ, अधिकार र पहिचानका लागि आन्दोलनमा छ र अन्य विभिन्न समस्याले ग्रस्त छ भन्दैमा पहाड र हिमाल सुगम, शान्त, विकसित छ भन्ने होइन । खान पुग्ने अन्न उत्पादन नहुनु, सिञ्चाइँ, सडक अभाव जस्ता विभिन्न समस्याले पहाड र हिमाल पनि पीडित छ । सबैभन्दा पहिले आफ्नो सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन जरूरी छ । मधेसका नागरिक पनि नेपाली नै हुन् भन्ने भावना जुम्लाको कुनै तामाङ समुदायको व्यक्तिले भन्न सक्नुपर्छ भने झापाको एउटा व्यक्तिले हुम्लाको समस्या बुझ्न सक्नुपर्छ र इलामको मान्छेले दार्चुलाको विषयमा जानकारी लिनुपर्छ ।
पछिल्लो समय बढ्दो शहरीकरण, सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग र विश्वव्यापीकरणको प्रभावले ‘मिक्स सोसाइटी’को अवधारणा बढ्दै गएको छ । आफ्नो जातीय एवम् सामुदायिक पहिचानभन्दा माथि उठेर समाजमा मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने भावना विकास हुन थालेको छ ।
भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि मधेस र पहाडका जनताले यस्तै समाजिक सदभावको अभिव्यक्ति र चाहनालाई आफनो मतमार्फत प्रकट गरेका छन् । उनीहरू राजनीतिक कलेवर भन्दा माथि उठेर मधेसबाट पहाडी र पहाडबाट मधेसी नेतालाई जीताएर मधेस र पहाडको संगमका रूपमा नेपालको राजनीतिलाई व्याख्या गरेर अनुपम सन्देशको नमूना अभिव्यक्त गरेका छन् ।
यसपटको निर्वाचनमा धेरै यस्ता अनुहार देखिए जो पहाडको भएर मधेसबाट जीत हासिल गर्न सफल भए भने मधेसी उम्मेदवारले पनि पहाडी मतदाताको मत पाएर जीत प्राप्त गरे । भित्री मधेसमा समेत कतिपय पहाडी मूलका उम्मदेवारले राम्रै स्थान पाएका छन् भने पहाडी मतदाता बढी मानिने कतिपय क्षेत्रमा मधेसी मूलका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । जनताले जातीयता र क्षेत्रीयताका आधारमा नभई राजनीतिक दल, उम्मेदवार, संगठन, लोकप्रियता र मुद्दाका आधारमा मताधिकार प्रयोग गरेको देखियो । मोरङको क्षेत्र नम्बर १, २ र ३ मा क्रमशः एमालेका घनश्याम खतिवडा, नेपाली कांग्रेसका डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल र एमालेकै भानुभक्त ढकाल मधेसी समुदायको मतसहितले प्रतिनिधिसभामा विजयी भएका छन् । भित्री मधेस मानिने सिरहा क्षेत्र नम्बर ३ मा एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठ र सिरहा १ मा कांग्रेसका प्रदीप गिरी विजयी हुनु मधेस र पहाडबीचको विभेद अन्त्य गर्ने जनताको चाहना मतबाट प्रकट भएको देखिन्छ । यस्तै, महोत्तरी १ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका गिरिराजमणि पोखरेल र क्षेत्र नम्बर २ मा राजपाका शरत्सिंह भण्डारीले कांग्रेसको जीत पनि यसैको उदाहरण हो । सर्लाही १ मा राजपाका प्रमोद साह, धनुषा ४ मा एमालेका रघुवीर महासेठ र सर्लाही ४ मा फोरमका राकेशकुमार साह पहाडी मतदाता बढी भएका क्षेत्रबाट जित्ने मधेसी अनुहार हुन् ।
सोचमा परिवर्तन, आफ्नो देशभित्र भएका जातजाति, भाषाभाषीको विषयमा जानकारी राख्ने हो भने मधेस र पहाडका विषयमा उत्पन्न भएको दूरी घट्न सक्छ । मधेस र पहाडको बीच दूरी बढाएर होइन घटाएर देशलाई समृद्ध बनाउने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ । द्वन्द्व र दूरीले कसैलाई हित गर्दैन । –मधेस दर्पण फिचर सेवा
मधेसको नाममा क्षेत्रीयरूपमा राजनीति गर्न खोलिएका दलहरूले अब आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्दै सामाजिक विखण्डनको होइन, एकता र सहकार्यका लागि पनि लड्नुपर्छ